AU neSADC Dzinoti Hapana Sarudzo muZimbabwe Pasina Bumbiro Idzva
WASHINGTON — African Union, AU, iri kutarisirwa kuzeya nyaya yeZimbabwe neKenya kumusangano wayo uri kuitirwa kuAddis Ababa, Ethopia muna Ndira paine kurudziro yekuti pasavezve nekudeurwa kweropa musarudzo dziri kutarisirwa munyika mbiri idzi.
AU neSADC ndidzo dziri kuongorora kuti zvinhu zviri mugwara here panyaya yekuvandudzwa kwezvinhu pasati paitwa sarudzo muZimbabwe.
Vakuru muSADC neAU vanoti mutungamiri weSouth Africa, VaJacob Zuma, vanove mutongi gava weSADC panyaya yeZimbabwe, vari kutarisirwa kutura gwaro kune vamwe vatungamiri veAU rinotaridza pasvika Zimbabwe panyaya yegadziriro yesarudzo uye kupa kurudziro yekuti zvinhu izvi zvizadzikiswe pasati paitwa sarudzo.
VaMugabe, pamusangano webato ravo wepagore wakapera neMugovera, vakati kana vari kunyora bumbiro vakasaripedza muna Zvita muno, vachaita kuti paramende isiye basa voita sarudzo muna Kurume vachishandisa bumbiro riripo iye zvino.
Asi pasi pechibvumirano cheGlobal Political Agreement, GPA, VaMugabe havana masimba ekuita zvavari kutaura vasina kuwirirana nevamwe vavo muhurumende.
Vatungamiri veSADC vakasangana neMugovera kuTanzania vakapawo kurudziro yekuti Zimbabwe izadzikise zvose zviri muchibvumirano chezvematongerwo enyika, cheGPA, uye kuvhotera bumbiro remitemo idzva isati yaita sarudzo.
Vatungamiri venyika dzemuAfrica vanonzi havasi kuda kuti muZimbabwe nemuKenya mudeurwe ropa sezvakamboitika kuKenya muna 2007 nemuZimbabwe muna 2008 zvikapa kuumbwa kwehurumende dzemubatanidzwa munyika mbiri idzi.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika, uye vachiona nezvekufambiswa kwemabasa musangano reCrisis in Zimbabwe Coalition kuchamhembe kweAfrica, VaPhillan Zamchiya, vanoti SADC neAU dzave kuratidza kuti dzave nemeno kana dzava kutora matanho akasimba panyaya yeZimbabwe .